.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ကွန်ပျူတာမှာ Android APK Logo တွေ ကြည့်လို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်
ကွန်ပျူတာမှာ Android APK Logo တွေ ကြည့်လို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာမှာ Android Apps APK ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်
ဖိုင်အဖြူရောင်လေးတွေပဲ မြင်ရပါတယ်။ ဖိုင်နာမည်တွေကလည်း တစ်ချို့ကပြောင်းရေးထားတော့ ဘယ်ဆော့ဝဲလ်က
ဘယ်ဟာမှန်းမသိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်..အဲဒီတော့ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာမှာ Android APK Logo တွေ ကြည့်လို့ရဖို့အတွက်
အောက်ပါဆော့ဝဲလ်လေးကို Install လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ..
ဂျပန်စာလား တရုတ်စာလားတော့ မသိဘူး။ သူပေါ်လာပေးတဲ့အတိုင်းသာ လိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဒေါင်းထားတဲ့
apk ဖိုင်တွေကို ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အပေါ်ကပုံလေးလို Apk Logo ပုံလေးတွေ မြင်ရပါပြီ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပါစေ။
Download: ANDROID APK LOGO
Posted by Thurainlin at 01:45
Labels: Android App, Computer, Software